Forum serasera malagasy TOMBO-KASE FAHAEFATRA!!!! - Dinika forum.serasera.org
Fitohizan'ny hafatra : TOMBO-KASE FAHAEFATRA!!!!
midrou - 17/01/2021 10:01
Ry namako isany! Mba efa fantatrao ve hoe tombo-kase faha4 isika izao.
1- Inona no zavatra tena manamarika ny tombo-kase faha4?
2- Inona no tokony ho hataonao?
midrou - 17/01/2021 10:04
Apokalypsy 6 : 7. Ary rehefa novahany ny tombo-kase fahefatra, dia reko ny feon'ny zava-manan'aina fahefatra nanao hoe: Avia*. [* Ampio hoe: (ka izahao)] 8. Ary hitako fa, indro, nisy soavaly hatsatra, ary ny anaran'izay nitaingina ary atao hoe Fahafatesana, ary ny Fiainan-tsi-hita* nanaraka azy. Ary nomena fahefana tamin'ny ampahefatry ny tany ireo hamono amin'ny sabatra sy ny mosary sy ny fahafatesana sy ny bibi-dia ety an-tany. [* Grika: Hadesy]
RBNIR - 20/01/2021 12:45
Faly miarahaba anao indray namana midrou,
Faly miarahaba ny mpisera rehetra ihany koa nahatratra ity taona vaovao ity indray,
Ny fahasoavan'Andriamanitra anie hirotsaka amintsika sy ny ankohonantsika rehetra mandritra ity taona 2021 ity
soavaly hatsatra? = soavaly marary izany matoa hatsatra = manambara aretina izany....
RBNIR - 20/01/2021 13:22
fahafatesana mitaingina azy? = aretina miafara hatramin'ny fahafatesana....
nomena fahefana amin'ny ampahefatry ny tany = areti-mandringana be mihitsy handipaka olona maro be...
marina tsy tena ny zava-misy ankehitriny ity lazainao ity ry midrou an!
tombo-kase fahefatra = areti-mandringana handripaka ny hapahefatry ny tany...Covid 19 dia inona koa???
RBNIR - 20/01/2021 15:13
Ary ireto no tena mampitahotra...
Vokatr'ity aretimandringana be ity dia....
1 périr les hommes par l'épée = hifandringana ny zanak'olombelona
2 par la famine = ho fatin'ny hanohanana ny maro
3 par la mortalité = io ilay fahafatesana hateraky ny areti-mandringana
4 et par les bêtes sauvages de la terre. = dia efa mihomana ry zareo fa hiakatra an-tanana ny bibidia rehetra ary handripaka olona maro izy ao anatin'izany....(efa miseho izany izao any an-dafy any an!!!) mitandrema tsara ianareo akaiky ala ala ireny ....
ka mipetraka marina ny fanontaniana hoe inona ary no tokony hatao e?????
RBNIR - 20/01/2021 15:15
RBNIR - 20/01/2021 15:24
Izao no hafatra atolotra ampitiavana be ho an'ny rehetra...
Misy olona iray ankehitriny nampianarin'i Jesosy mivantana, sy nampahafantariny ny dikan'izao zavatra rehetra mitranga izao ary koa nampianariny ny fahamarinana rehetra ao anaty baiboly indrindra indrindra fa ny bokon'ny apokalipsy araka ny tena izy fa tsy amboamboarina...
araho ny fandaharny, henoy izy fa ao no hamantaranao ny tokony ataontsika rehetra amin'izao fotoana izao....
Hitanao izany fandaharana izany ankehitriny ao amin'ny kolo TV isa-maraina amin'ny 5ora sy sasany ka hatramin'ny 6 ora (manomboka ny alatsinainy ka hatramin'ny zoma)
Ny Tompo anie hampahiratra ny masontsika rehetra....
SAMIA HO TAHIN'ANDRIAMANITRA DAHOLO;;;;
RBNIR - 25/01/2021 11:51
Rehefa tonga ny aretimandringana dia tsy hivoaboaka intsony ny olona dia hanomboka hiverina hiakatra an-tanana ny bibidia...ary dia handripaka olona maro...sy biby fiompy maro....
gasy1zay - 01/03/2021 19:51
Mba hainareo ve ry namana fa misy fotoana roa samihafa ny fiveren'i Jesoa Kristy?
1) Hiverina haka ny olona maty tao amin'i JK sy ireo "virjiny hendry"
1 Thessaloniciens: 4.16-17
2) Hiverina miaraka amin'ny anjeliny sy ny miaramilany hiady amin'ilay bibidia sy ny miaramilany
2 Thessaloniciens: 1.7
Tsy maintsy mitranga ilay fiverenan'i JK voalohany satria voalaza mazava fa
1 Thessaloniciens: 5.9 Car Dieu ne nous a pas destinés à la colère, mais à l'acquisition du salut par notre Seigneur Jésus Christ,
ka noho io voasoratra io dia tsy hitranga ny famoahana ny tombo-kase izay manambara ny fahatezeran'Andriamanitra raha tsy efa nalain'ny Tompo tsy ho ety an-tany intsony ireo olony
RBNIR - 02/03/2021 14:33
Faly misera aminao indray ry gasy1zay dia mirary soa ho anao ihany koa amin'izao taona vaovao izao....
Rehefa hiverina i Jesosy Kristy dia misy zavatra maro hitranga ary dia misesy tsara araka ny filaharany...
P.S : tsy hoe tonga Izy dia miverina indray fa tonga Izy dia hisesy ireo trangan-javatra ireo anisany ny fisamborana sy fanipazana an'ilay bibidia sy ilay mpaminany sandoka any amin'ny afobe, anisany ihany koa ilay fampiakarana ny olomboafidy eny amin'ny rahon'ny lanitra...fa mbola misy zavatra hafa ihany koa fanovana ny olona indray mi-pi-maso, ireo famantarana lehibe 4 ny fandorana ny tany , ny fanipazanana an'i satana any amin'ny helo sns...
Tianao ho fantatra v ny tena filaharany marina???
Araho ireto fandaharana ireto...
midrou - 12/06/2021 19:21
RBNIR Faly miarahaba anao indray namana midrou,
Faly misera aminao koa de miarahaba anao koa nahatratra ity taona vaovao ty e! Elaela ndray vao afaka mandalo!
Tena marina izany !!!
Tena mahatsiaro sambatra aho ankehitriny manoloana ny zava-misy @ izao sy izay mbola hoavy manana ity tenin'i Jesosy ity:
Matio 13 : 11. Ary namaly Izy ka nanao taminy hoe: Satria ianareo no navela* hahalala ny zava-miafina ny amin'ny fanjakan'ny lanitra, fa ireny kosa tsy mba navela**. [* Grika: nomena] [** Grika: nomena]
Inona tokoa no tokony hatao ?
midrou - 12/06/2021 19:40
Betaka no tsy mbola mahalala mihintsy , fa misy kosa tsy mety mino raha hilazana hoe efa tafajoro eto ambonin'ny tany indray ankehitriny ilay FIANGONANA izay rava nohon'ny fanenjehana t@ andron'ny Apostoly. Ary efa misy araka izay ny fitorina io fahamarinana io @ izao fotoana izao, satria raha ny baikon'i Jesosy dia hatrany amparan'ny tany (izao tontolo izao) dia mila mandre an'io daholo vao ho tonga ny farany . Matio 24 : 14. Ary hotorina amin'izao tontolo izao ity filazantsaran'ny fanjakana ity ho vavolombelona amin'ny firenena rehetra, dia vao ho tonga ny farany.
Efa misy Apostoly nofidin'i Jesosy Kristy mivantana , nohosorany mivantana , nampianariny mivantana...
Koa ny torohevitra omeko anao dia araho ny hafatra hoentiny. Fa tsy misy azoko omena ano ankoatr'izay.. Raha manaiky moa ianao dia hifaly indray andro any hoe : soa ihany aho fa nanaiky''
Raha sanatria kosa ka handa, dia indrisy....
RBNIR 20/01/2021 15:24
dyyy - 23/06/2021 20:42
les gestes barrières sont une ultime parade face à ce virus, mais n'oublions pas que la condition humaine originale à toujours su affronter toutes les pandémies mondiales sans avoir a appliquer tous ces artifices de notre ère, il n'y a rien de nouveau sous le ciel bleu, tout se répetent depuis la nuit des temps.ref
dyyy - 23/06/2021 20:44
RBNIR - 29/06/2021 11:40
les gestes barrières sont une ultime parade face à ce virus, mais n'oublions pas que la condition humaine originale à toujours su affronter toutes les pandémies mondiales sans avoir a appliquer tous ces artifices de notre ère, il n'y a rien de nouveau sous le ciel bleu, tout se répètent depuis la nuit des temps.ref
les gestes barrières....certes mais cela ne doit pas empêcher les gens à croire en Dieu...
Réflexion pour tous...des savants croyants...
Page rendered in 12.1238 seconds